Intlanzi yeNeon: Iimpawu, i-biology kunye nokhathalelo | Ngeentlanzi
Intlanzi ye-neon Enye yezona ntlanzi zifunwayo kwi-aquarium ngombala wayo oncomekayo. Igama layo lenzululwazi ngu Paracheirodon innesi kwaye yenye yezona ntlanzi zinomdla ezikhoyo. Kweli nqaku siza kuyazi nzulu le ntlanzi nazo zonke iimpawu zayo kunye nokhathalelo oludingayo lokubagcina besempilweni. Ukuba ujonge ukufunda ngakumbi ngale ntlanzi ukongeza kwitanki lakho, ungaphoswa yile post kwaye uqhubeke ufunda 🙂
Ngaba uyafuna ukwazi yonke into malunga neon fish?
5 Ukhathalelo lweentlanzi zeNeon
Le ntlanzi incinci kakhulu nangona ibonakala kakhulu. Imalunga neesentimitha eziyi-3,5 ubude. Ubume bayo buhonjisiwe. Oko kukuthi, inde kunokuba ibanzi. Njengezinye iintlanzi ezininzi, inomsila wefolokhwe kwaye ine-adipose fin encinci phakathi komqolo kunye nomsila wokugqibela.
Emacaleni iyasimangalisa ngombala wayo oqaqambileyo kwaye oqaqambileyo oluhlaza okwesibhakabhaka. Xa ukukhanya kubetha umbala oluhlaza okwesibhakabhaka ukhanya ngokuqaqambileyo. Umgca wombala uqala esweni kwaye ubaleke phantse wonke umphezulu ukwenza umahluko omhle phakathi kohlaza okwesibhakabhaka nobomvu nawo wonke umzimba omhlophe.
Ngaphandle kwento yokuba le ntlanzi yahlukile, kukho abantu abayiphosayo ngokulula kwiikhadinali tetra. Zombini iintlanzi zabelana ngee-shades ezifanayo ezibomvu noluhlaza okwesibhakabhaka, ke oko kunokuba nokudideka. Ukwahlulahlula, kufuneka uqonde ukuba umgca obomvu wekhadinali tetra iqala emlonyeni ize ifikelele esiphelweni somsila.
Emlonyeni weentlanzi ze-neon sifumana amazinyo amancinci kakhulu. Kungenxa yokuba yeyosapho olunye neepiranhas. Ukubonakala okumsulwa kwale ntlanzi kusenza sizibuze ukuba yintoni na usapho lwayo.
Indawo yokuhlala yale ntlanzi ikhona Amanzi amnyama. Ezi ntlobo zamanzi zezo zithambileyo kwaye zine asidi. Nangona kunjalo, banokuhlala emanzini acocekileyo.
Indawo yokuhambisa ikwiziko leAmazon, yonke indawo esempuma yePeru neColombia. Kula mazwe afanayo sifumana iisampulu kwimilambo ethambileyo yamanzi, emanzini amatsha. Abakwazi ukumelana nokuxinana okuncinci kwetyuwa.
Imvelaphi yayo yiLatin American, nangona uninzi luthengwa ezivenkileni. Zikhule ngamandla eMzantsi Asia ukuze zithengwe kwaye zithengiswe. Kunzima kakhulu namhlanje ukufumana isampulu eye yazalelwa eBrazil, ePeru okanye eColombia. Uninzi lwabo luzelwe ekuthinjweni kwasekuzalweni.
Ukondla iintlanzi ze-neon akuyomfuneko ukuyinika ukutya okuphilayo. Ixesha nexesha singamnika imibungu yengcongconi. Musa ukumnika ukutya okuninzi, kodwa akunike ukutya angakutya kamnandi. Singabandakanya nezinye iintlobo eziphilayo ezinje Artemia salina okanye iDaphnia. Ndiyabulela ekusetyenzisweni kokutya okuphilayo, imibala yayo eqaqambileyo iya kuhlala ikhanya.
Iintlanzi ze-Neon zi-omnivores, ikwanokondla izityalo. Sinokukunika imifuno emitsha ngamanye amaxesha. Ezinye iilethisi ezincinci okanye iitumato. Kuyacetyiswa ukuba batye kathathu ngemini.
Xa sinemizekelo etankini yeentlanzi, kufuneka sikhethe ezo sifuna ukuzenza kwakhona. Ihlala icetyiswa ukuba ikhethe abantu abancinci kunye nokukhula kwabo ngokwesondo. Ezi ntlanzi ziya kuba nakho ukuvelisa kwakhona. Kubalulekile ukuba bazalwe emanzini ane-pH ephezulu okanye emanzini anzima abayi kuzala.
Ukukhetha abantu ababhinqileyo kakuhle, kufuneka sikhethe eyona iqobileyo kwaye izele ngamaqanda. Ukuzala Ingafikelela kumaqanda angama-80 ukuya kuma-250. Xa oku kusenzeka, kubalulekile ukuba ususe abazali kwitanki lamantshontsho ukubathintela ekutyeni amaqanda. Kufuneka sahlule i-broodstock kwitanki eyahlukileyo ukuze kungabikho kuphazamiseka ekuzaleni nezinye iintlanzi ezikwi-aquarium.
Ukuze amaqanda aphile, kufuneka siwashiye ngaphandle kokukhanya. Kuyacetyiswa ukuba kubekho i-aerator evelisa umbane omncinci kwaye ubeke imveliso ethile ukuze ukungunda kungasasazeki. Amaqanda aqanduselwa emva kweeyure ezingama-24. Emva kweentsuku ezimbalwa, abancinci kufuneka bondliwe ngaphezulu ukuze bakwazi ukukhula kakuhle. Kwiinyanga nje ezintathu sizokwazi ukubandakanya abancinci kwi-aquarium enkulu kunye nezinye iintlanzi.
Ukhathalelo lweentlanzi zeNeon
Ukuze iintlanzi zethu ziphile ixesha elide kwaye zikhule kakuhle, kufuneka siqwalasele imiba ethile. Into yokuqala bubushushu kunye nomgangatho wamanzi. Iqondo lobushushu kufuneka libe phakathi kwama-20 ukuya kuma-25 degrees ukulinganisa indalo esingqongileyo abavela kuyo. Ukuba iqondo lobushushu liphuma kolo luhlu kunokuba yingozi, kuba abanakukwazi ukubumela ngokulula. Ufuna amanzi ukuze abe ngamanzi amnyama. Oko kukuthi, ukuba izityalo zixinene kwaye azide kakhulu ukuvumela ukukhanya kudlule.
Kuba ezi ntlanzi zinovakalelo ekukhanyeni, kungcono ukuba ungazibeki kubo ukukhanya. Indlu enengxolo inokuchaphazela inkqubo yakho yeemvakalelo kwaye ke ukukhula kwakho. Kubalulekile ukucoca amanzi nge-peat kwaye ubilise malunga nemizuzu eli-10 ukuze ingabinayo isodiyam kwaye kukho ikhalsiyam encinci. Yintoni ebaluleke kakhulu yile amanzi awanayo nayiphi na iklorini ukuze angonzakalisi iintlanzi.
Ngokubhekisele kwintlanzi ezinokuthi zihlale kunye nayo iintlanzi, kufuneka kukhunjulwe ukuba banochuku kumalungu osapho olunye. Zilungelelaniswe ngokulandelelana, ke iqela lethu leentlanzi ze-neon alinakuba ngaphantsi kwe-10 yeentlanzi. Esi sakhiwo siphezulu sifuneka kwiintlanzi ze-neon ukuze zive ukuba zikwimeko ezifanelekileyo ukuze zisinde. Amalungu aphambili eqela aya kujikelezwa ngabantu abakwizikhundla ezisezantsi, oko kuthetha ukuba amalungu awona malungu angaphandle eqela akhuselekanga kangako.
I-aquarium kufuneka ibeneemilinganiselo ezinokubamba malunga neelitha ezingama-60 zamanzi. Udinga indawo engenanto embindini engenazityalo okanye uhombiso ukuze ufumane indawo engaphezulu. Sinokusebenzisa iinkuni ukufumana ubumnyama emanzini ayo.
Okokugqibela, ukuba ezi mizekelo zivakalelwe kukuba zinayo yonke into ephantsi kolawulo, kubalulekile ukuba imvelaphi imnyama. Ukongeza, oku kuyakuthelekiswa nombala weentlanzi zethu kwaye i-aquarium iya kufumana ubuhle obukhulu.
Ngolu lwazi unokufunda ngakumbi ngale ntlanzi inemibala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Intlanzi yeNeon